“Difaacida Lionel Messi waa hawl aan macquul ahayn!” – Antonio Rüdiger – Gool FM
(London) 04 Jan 2022. Daafaca kooxda chelsea ee Antonio Rüdiger ayaa carabka ku adkeeyay in la ciyaarista xiddiga reer Argentina ee Lionel Messi ay tahay arin aan macquul ahayn sida uu sheegay.
Hadalka Rüdiger ayaa kusoo aadaya xilli uu ka hadlay kooxdii ugu adkeyd ee uu la kulmo xirfadiisa ciyaareed, daafaca Jarmalka ayaa carabka ku adkeeyay inuu aaminsan yahay in Messi uu yahay ciyaaryahanka ugu fiican adduunka.
Wargeyska The Sun ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Antonio Rüdiger, wuxuuna yiri:
“Waa kuma ciyaaryahanka ugu fiican? haddii aan dooran lahaa qof wuxuu noqon lahaa Messi.”
“Messi miyuu yahay kii abid ugu fiicnaa? ma aanan arkin Pele ama Maradona oo ciyaaraya, taasi ma ahayn waqtigeyga, sidaas darteed jawaabtayda waxay noqon doontaa Messi.”
“Marka aad la ciyaareyso Messi, waxaad dareemaysaa inay isaga ku xiran tahay, haddii uu niyad fiican ku jiro oo uu maalin wanaagsan haysto, ma joojin kartid isaga.”
Rüdiger ayaa wuxuu koox ka sameeay xiddigihii ugu adkaa uu ku wajahay xirfadiisa kubadda cagta waxaana dhanka shabaq ilaalinta ku soo baxay goolhaayaha reer Germany ee Manuel Neuer, waxaana hortiisa uu dhigay Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Ramos iyo Wan-Bissaka.
Khadka dhexe wuxuu soo xushay Kevin De Bruyne, Kanté iyo Iniesta, halka dhanka weerarka uu dhigay xiddigaha Messi, Ronaldo iyo Aguero.
Barcelona, Chelsea, Real Madrid & Guud ahaan kulammada caawa laga ciyaari doono tartammada maxalliga ee dalalka England iyo Spain